Dropbox ayaa bilaabay tijaabinta codsigeeda Apple Silicon ku habboon | waxaan ka imid mac
Dropbox ayaa bilaabay tijaabinta codsigeeda Apple Silicon ee ku habboon
Mid ka mid ah codsiyada ugu wanagsan ee lagu keydiyo laguna wadaago xogta daruuraha, ayaa ugu dambeyntii ku bilaabeysa tijaabooyinkeeda Apple Silicon. Sidan oo kale, in kasta oo ay qaadatay waqti, haddana ma rabto in ay noqoto mid ka mid ah codsiyada yar ee aan asalka ahayn ee leh chip-ka cusub ee Apple kaas oo haddii wax walba si fiican u socdaan, 2022 ma sii jiri doono. Intel gudaha Macs Apple. Tijaabinta nooca hooyo ee codsigaaga Mac ayaa mar hore bilaabmay.
Kadib dhaleeceyn uga timid macaamiisha Dropbox iyo isticmaalayaasha, imtixaanada nooca asalka ah ee codsiga Mac iyo taageerada Apple Silicon ayaa ugu dambeyntii bilaabay. Bishii Oktoobar, jawaabaha rasmiga ah ee faallooyinka faallooyinka Dropbox waxay soo jeediyeen in Dropbox uusan qorsheyneynin inuu ku daro taageerada Apple Silicon codsigiisa Mac. Tani waxay sii wadi doontaa inay ku tiirsanaato tignoolajiyada Rosetta 2 si ay u tarjumto codsiga ku saleysan Intel. Ugu dambeyntii, maamulaha shirkadda ayaa sheegay in Dropbox ay qaadan doonto taageerada waddaniga ah ee chips-yada cusub ee Apple, qeybtii hore ee 2022. Waxay u muuqataa in waqtiyadii loo qabtay la gaaray. Iyadoo la tixgelinayo in qeybta hore ay socoto illaa Juun.
Tani waxay la macno tahay in haddii arrimuhu si fiican u socdaan, Rosetta 2 waa la joojin doonaa in Mac-yada cusub, codsiyada marmar si tartiib tartiib ah u socdaan, iyaga oo si yar u isticmaalaya faa'iidooyinka waxqabadka iyo waxtarka awoodda Apple Silicon. Taasi waa, waxay la mid tahay inaad haysato Formula 1 oo aan aniga qudhaydu wado halkii aan ka ahaan lahaa xirfadle. Haddii aan ku darno in ay tahay sir furan in Dropbox uusan ahayn codsiga ugu xaddidan ee suuqa. Waxaa lagu dhaleeceeyay inay u baahan tahay xusuus badan iyo "cunida" batteriga.
Dropbox ayaa xaqiijisay in ay bilowday tijaabinta app-ka asalka ah iyada oo la adeegsanayo qayb yar oo ka mid ah saldhigga isticmaalaha Mac iyo in ay qorsheyneyso in ay siiso dhammaan isticmaalayaasha socodsii nooca beta ee abkaaga dhamaadka Janaayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Dropbox ayaa bilaabay tijaabinta codsigeeda Apple Silicon ee ku habboon
wallpapers buuraha ugu fiican ee Mac
Jeff Wilcox, oo mas'uul ka ah u wareejinta Apple Silicon, wuxuu aadaa Intel